किन सुन्दैनन् प्रचण्डले कान्छाबहादुर ? - Vishwa News
किन सुन्दैनन् प्रचण्डले कान्छाबहादुर ?
पुरुषोत्तम लम्साल / हाल अमेरिका
एउटा परिचय पत्र छ । परिचय पत्रको दायाँ किनारामा अध्यक्ष तथा सर्वोच्च कमाण्डर लेखिएको अक्षरमाथि बर्दीधारी प्रचण्डको तस्वीर छ । परिचय जनमुक्ति सेना नेपाल तेस्रो डिभिजनको कार्यालयले बनाएको छ । परिचय पत्रवाहकको नाम हो शक्ति गुरुङ । जनमुक्ति सेनाको सेक्सन कमाण्डरको हैसियतमा रहेका उनलाई पार्टीले दिएको टेक नाम हो क. बिद्रोह । पूर्णतः खारेज भइसकेको प्रचण्डपथसँग माक्र्सवाद लेनिनवाद र माओवाद टिपोट गरिएको उक्त कार्डका बाहक व्यक्ति अहिले कारागारमा छन् । अभियोग चाँहि सेनाबाट भागेर माओवादी भएको । उनीविरुद्ध १० वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको छ । र, शक्ति गुरुङलाई आधार बनाएर अब धेरै जेल जाने हौवा पिटाउने खेलमा धेरैले रमाइलो लिन थालेका छन् ।
संसद्मा कसले कति हल्ला गर्छन् अलग कुरा तर मसिनो स्वरमा गम्भीर कुरा चाँहि कमैले गर्छन् । यसमध्ये एक जना छन् माओवादी पृष्ठभूमिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका देव गुरुंग । उनले दुई महिनाअघि (असार १ गते) ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल निश्कर्षमा पुग्न नदिन देशी प्रतिक्रियावादी र बिदेशी शक्तिकेन्द्र लागिपरेको’ ‘तथ्यमा आधारित’ दावी गरे । उनको भनाई थियो, ‘द्न्द्वकालीन मुद्दा देखाएर नेपालमा बिदेशी सेना (हस्तक्षेप ?) भित्र्याउने खेल हुँदैछ ।’ उनले थपेका थिए, ‘बिदेशी शक्तिले नेपालको शान्तिप्रक्रियाका मुद्दाहरु अड्काइरहेका छन् ।’
गुरुङको दावी कूटनीतिक नियोगको आवरणमा राजनीति गरिरहेका राजदूतहरु ( ९देशका राजदूत), तिनकै लगानी (फण्डिङ)बाट गैरसरकारी धन्दा चलाइरहेका नेपाली सभ्रान्त बर्ग र तिनैको लिखत प्रतिवेदन आधार बनाएर नेपालको संक्रमणकालीन न्याय उछाल्न लागिपरेको राष्ट्रसंघीय निकाय (विज्ञप्ती) समेतको सन्दर्भमा थियो । नाम तोक्न गुरुङले जति जिब्रो चबाए पनि समय र सन्दर्भले त्यसैलाई स्पष्ट पारिरहेकै थियो ।
बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा उछालकुद गर्ने एउटा बर्गले काभ्रेका अर्जुन लामाको प्रकरणमा प्रचण्डका अति नजिकका ठानिएका अग्नी सापकोटालाई मुछेर शुरु गरेको चलखेलले सचेतक देव गुरुङको मनमा चिसो पसेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
दोस्रो कारण, फौजी कारबाहीका कमाण्डर यमबहादुर अधिकारी उर्फ प्रतीक्षा । त्यो बेला उनी थिए बासु स्मृति चौथो ब्रिगेडको कमाण्डर । यी उनै प्रतीक्षा हुन् जो अहिले नेपाली सेनाको फूल कर्णेल छन् । तारे कर्णेल अर्थात् महासेनानी । सेनाको गजुरी क्याम्प (ब्यारेक)बाट घेरा तोडेर हत्कडीसहित भागेका माओवादी लडाकू प्रतीक्षाले त्यहींको सेनालाई गुरिल्ला युद्धबाट पछारेर कीर्तिमान बनाए र रणनीतिक प्रत्यकक्रमणको चरणलाई उर्जा भर्ने काम गरे । अर्थात् कृष्णभीर आक्रमणका कमाण्डर यमबहादुर अधिकारी उर्फ प्रतीक्षा ।
सेना भन्छ उनी हतियारसहित भागेर माओवादीको जनमुक्ति सेनामा भर्ना भए । माओवादी भन्छ कब्जामा लिएका सिंहबहादुरले जनमुक्ति सेनामै बस्ने बताएपछि कमरेड ‘सफल’ नाम लिएर उनी जनमुक्ति सेना भए ।
सेनाबाट विद्रोह गरेको भनेर फूलमाला र अबीर दल्ने माओवादी जनमुक्ति सेनाका प्राधिकार, कमाण्डरहरु राज्शक्तिको हर्ताकर्ता भएको बेलामा कालिकोटे सिंहबहादुर शाही आजीवन कारावास स्वीकार गर्न अभिषप्त भए । ६ जना लालाबाला सन्तानसहितको सिंहबहादुरको परिवारमाथिको बज्रपात न जनमुक्ति सेनाका प्राधिकार प्रचण्डको कानमा पर्यो, न छापामार दस्ताका कमाण्डर हुँदै उपराष्ट्रपति बनेका नन्दकिशोर पुन उर्फ पासाङ, जनार्दन शर्मा उर्फ प्रभाकर, अनन्त र बलदेवले नै सुने ।
हो, कान्छाबहादुरले भनेको द्न्द्वकालीन मुद्दा र संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ सिंहबहादुरसम्म ठोक्किन्छ । किनकि, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अझै पनि उनको अपील पेण्डुलम दस्तावेज बनेर कुहिने क्रममा छ । यो त्यही आयोग हो जसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निरन्तर नेपाल सरकारसँग असन्तुष्टी जनाइरहेको छ । हो, यही संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई लिएर कोही प्रचण्डलाई हेग लैजाने सपना देखिरहेका छन् र प्रचण्ड हेगमा अपराभधीको कठघरामा उभिएर विश्वले चिन्ने हिरो हुने रहर पालिरहेका छन् । कठै …! सिंहबहादुरहरु, झुलकुमारहरुलाई आजीवन कारावासमा कोचेर विश्वको हिरो हुने सपना पाल्ने प्रचण्डहरुलाई लालसलाम…! भन्नैपर्छ ।
डि सि मेट्रो क्षेत्रमा महापुराण शुरु : बिशाल कलश यात्रा सम्पन
इंग्ल्यान्ड यूरोकपमा छानियो, ह्यारी केनको ह्याट्रिक